I-Semalt Shares 7 Izici ezinhle kakhulu zeThuluzi lokuCula
Ukusebenzisa i-Data Scraping Studio, ungakhipha ulwazi kumawebhusayithi ozikhethele ngaphansi Imizuzu emihlanu. Ngokungangabazeki, ingenye yamathuluzi wokuhlunga iwebhu ewusizo futhi ewusizo kakhulu (ama-7) ku-intanethi. I-Data Scraping Studio ine-interface enamandla futhi enobungane-yomsebenzisi kanye ne-scrapes idatha evela kumasayithi e-Ajax, amasayithi avikelwe ngephasiwedi, amasayithi alula futhi ashukumisayo, i-XML, i-JSON neminye imithombo efanayo. Ezinye zezici zayo ezimangalisayo zibalulwe ngezansi.
1. Usesho lwegama elingukhiye elilula:
Njengawo wonke amanye ama-scrapers adumile, i-Data Scraping Studio inikeza indlela engcono yokusesha amagama angukhiye. Kumele ulande futhi usebenze leli thuluzi futhi ulisebenzise ukuhlela idatha yakho ngokusekelwe kumagama akho angukhiye. It uletha eziningi zamagama angukhiye kanye nemishwana ukuze uthole ugqozi. Ngakho-ke, akugcini nje kuphela ukukhipha idatha yakho kodwa futhi uyayilungiselela ngokususelwa kumagama akho angukhiye amancane nomsila omude.
2. Ucwaningo lweMakethe:
Idatha ye-Data Scraping iyona kuphela i-scraper eyenza ukusesha okuhle kwamakethe kubasebenzisi bayo. Ngokungafani nezinye izinto ezijwayelekile ze-data scrapers , leli thuluzi linikeza imiphumela yekhwalithi ngokusekelwe kusesho lwakho. Ngakho-ke, iphelele kubadayisi, abacwaningi be-intanethi, abafundi, izintatheli, kanye nabafundi.
Isizathu esihle sokusebenzisa i-Data Scraping Studio ukuthi sinikeza izinketho eziwusizo zokuhlanganiswa kwedatha yewebhu. Ihambisana nazo zonke iziphequluli zewebhu kanye nezinhlelo zokusebenza, okwenza kube lula ngawe ukuba ushaye idatha yakho futhi uyihlanganise ngokuvumelana nezifiso zakho.
4. Ukuqhathanisa idatha
Ngisho ne-top-notch data scrapers ayikwazi ukuqhathanisa idatha yamawebhusayithi amabili noma ngaphezulu. Ngokujabulisayo, i-Data Scraping Studio inayo le ndlela futhi ikuvumela ukuthi uhlaziye idatha yamakhasi ewebhu ahlukene ukuqinisekisa ukuthi uthole imiphumela enembile futhi enokwethenjelwa. Ngaphezu kwalokho, leli thuluzi lihlela idatha kancane, lisuse wonke amaphutha okupelomagama nelograma kusuka ekuphumeni kwakho.
5. Ihlola ikhwalithi:
Lolu hlelo lugada izinga lemininingwane yakho ngenkathi lisulwa. Kusho ukuthi awudingi ukugcina iso kulesi sizinda njengoba leli thuluzi lizokuthola ngokuzenzakalelayo idatha efundekayo futhi eguqukayo kwifomethi oyikhonzile.
6. Imininingwane yomlando / yomkhiqizo enikeziwe:
Abasebenzisi bale software bafinyeleleka kalula kumaphrofayli nemininingwane yomkhiqizo. Kusho ukuthi uma usebenzisa i-Data Scraping Studio ye-website yakho ye-e-commerce, ungathola ulwazi kusuka kuma-giant njenge-Amazon ne-eBay ngaphandle kokuyekethisa kwikhwalithi. Ungazama leli thuluzi ukuthola imininingwane yomkhiqizo, uhlu lwamagama abo, izincazelo zabo ngisho nezithombe. Ngakho-ke, singasho ukuthi i-Data Scraping Studio iyindlela ehle kakhulu ku-Amazon Scraper ne-Facebook Data Extractor.
Abasebenzisi abahlukahlukene bayakhalaza ngokuntuleka kwezixwayiso zomsebenzi wokukhwabanisa. Ngokungafani namathuluzi avamile, i-Data Scraping Studio izokuxwayisa uma idatha isusiwe. Udinga nje ukulungisa izilungiselelo zayo bese uqala ukuthola izaziso ngqo ebhokisini lakho lokungenayo. Ungakwazi futhi ukuxwayiswa kwiselula yakho usebenzisa izinketho zayo ezikhethekile. Ngakho-ke, i-Data Scraping Studio iyisofthiwe ephelele ehlose ukwenza inqubo yakho yokukhipha idatha ibe mnandi futhi elula. Into engcono kakhulu ukuthi iphuma mahhala Source .